Komishinar Alamaayyoo Ijjiguu: 'Waliigaltee mootummaafi ABO kan harkifachiise ABO dha' - BBC News Afaan Oromoo
Komishinar Alamaayyoo Ijjiguu: 'Waliigaltee mootummaafi ABO kan harkifachiise ABO dha'
21 Muddee 2018
Madda suuraa, EBC/Screen Capture
Akkaataa waliigaltee mootummaa fi ABO'n karaa nagaa waraana ABO biyya keessa jiru leenjii galchanii ramaduuf mootummaan qophii kan xumure tureera jedhu Komishinarri Poolisii Oromiyaa.
Loltoonni ABO biyya keessa jiran ramaddiin kennameefi qaama nageenyaatti akka makaman koreen dhaabbatee hojiin erga eegalamee bubbuleera.
Hanga yoonaatti garuu hojiin wanti mul'ate hin jiru. Kanaaf ammoo ABO'n harkifannaa gama mootummaan jiru akka sababaatti kaasa.
''Gama mootummaan of kennuufi haamileen duraan ture sun hir'ateera" jechuun miseensa Shanee Gumii ABO kan tahan Obbo Mikaa'el Booran BBC'tti himanii turan.
Waliigaltee mootummaafi ABO'tti wanti gufuu ta'e maali?
"Qawween siyaasa keessaa akka bahu waligalleerra"
''ABO'n sagantaa siyaasaa jijjiire hin qabu''
Komiishinara Poolisii Oromiyaa fi miseensa koree waloo mootummaa fi ABO dhimma kanarratti hojjetu kan tahan Komiishinar Alamaayyoo Ijjiguu garuu mootummaan waan gama isaan jiru xumuree ABO eegaa jira jedhu.
"Rasaasni osoo hin dhuka'iin, karaa nagaa WBO leenjii galchuuf koreen hundaa'e hojii isaa guutummaatti xumuruu baatus, gama mootummaan garuu qophiin xumurameera" jedhan.
"Jalqaba qaamaan deemnee waraana keenya waliin waan mari'annu qabna waan taheef yeroon nuuf haa kennamu jechuun al lamaa fi sadii koree irratti gaafatanii akka dheereffamu kan godhan ABO dha malee mootummaa miti" jedhu.
Koreen kun hojii qooddattee kan hojjettu yoo tahu miseensi gama mootummaan ijaarame baajataa fi wantoota leenjiif barbaachisoo tahan xumura.
Gama ABO'n ammoo waraana isaanii bakka jiranii walitti qabachuu, mariisisuu fi lakkoofsa isaanii adda baasanii dhiyeessudha jedhan.
Koreen gama mootummaan jiru hojii isaa xumuruun warra kan ABO eegaa jira jechuun Komishiner Alamaayyoon himan.
ABO'n waraanni keenya humna seena qabeessaa fi ogummaa cimaa qabu waan taheef humna waraanaa biyyaa keessatti bakka isaaf malu argachuu qaba jedha.
Gama biraan ammoo waraanni mootummaa amma jiru akkuma durii qabatamaatti aantummaa uummataa kan qabu osoo hin taane kan paartii tokko tajaajilaa jiru waan taheef jalqaba kunis sirrachuu qaba jechuun gaafata.
Komishinar Alamaayyoon ammoo jalqaba osoo waraana isaanii bakka tokkotti walitti qabanii hin dhiyeessiin akkasumas leenjii galanii namoota akkamii fi gahumsa akkamii qabu jennee osoo hin ilaaliin miseensa waraana isa kamii tahuu qabu jennee murteessuu hin qabnu jedhan.
"Erga leenjii galanii achi irratti kan adda bahee ilaalamu ta'a" jechuun BBC'tti himaniiru.
Waraanni Eertiraa irraa gale leenjii fudhachuun isaan keessaa 700 kan tahan poolisii Oromiyaatti akka makaman hojjetamaa jira.
Waraana wal irratti bobbaasuu
Koreen ijaaramte osoo hojii hin xumuriin gama biraan ammoo mootummaan waraana nurratti bobbaasaa jira jechuun ABO'n ni komata.
Waraanni biyya keessa kan socho'u nageenya uummataa eeguufi kan jedhan Komishinar Alamaayyoon, kanaaf eeyyama qaama kamiiyyuu gaafachuu hin barbaachisu jedhu.
Caasaa mootummaa irratti bakka gara garaatti tarkaanfii fudhachuu, daandii cufuufi waraanni mootummaa ammoo yoo kana hiikuuf naannichatti bobba'uu dhukaasa irratti banuun mul'ataa akka jiru dubbatu.
"Kun eenyuun raawwatama kan jedhu kan adda baasnu yoo waraanni ABO bakka tokkotti gale qofaadha" jedhu Komiishinar Alamaayyoon.
Waraanni gara Wallaggaattis kan bobbaafame rakkoo nageenyaa uummata Oromoofi Beenishaangul gidduutti uumame to'achuu fi daandiiwwan cufaman bansiisuufi jedhan.
'Gaaffii Oromootu ABO dhalche'
Egeereen waraanaa ABO maal laata?
Kana qaamni mootummaas ta'e ABO'n hidhatee jiru gufachiisuuf kan yaalu yoo tahe tarkaanfiin irratti fudhatamuun hin oolu jedhan.
Marii qaama mootummaafi ABO gidduu jiruun hojiin gaggaariin hojjetaman jiraachuu eeranii jijjiiramichi garuu gama waraanaan lafarratti mul'achuu qaba jedhan.
Qaamni hidhatee socho'u hundi...
ABO'n loltootni keenya eessa akka jiraniifi haala akkamiin akka socho'an ni beekna, hundi isaaniis ajaja dhaabaan ala hin socho'an jedha.
Rakkoolee nageenyaa bakka garaagaraatti uumaman waliin wal-qabatee loltoonni ABO maqaa dhahamuun dhaabicha maqa balleessuufi jechuun aanga'oonni dhaabichaa ni dubbatu.
"Osoo ABO'n waraana isaa leenjii galchee, loltootni ani qabu kana jedhee beeksisee, shira biraa maqaa ABO'n hawwaasa keessatti raawwatamu adda baasuun mootummaan tarkaanfii fudhata" jedhu Komishinar Alamaayyoon.
"Oromoon sirna Gadaan mootummaa ofiin of bulchu hundeeffachuu danda'a"
Yoo kun tahe ABO'nis maqaa isaan yakka waamamu irraa bilisa taha jedhan.
Mootummaan rakkoo nageenyaa Lixa Itoophiyaatti mul'atu hiikuuf Komaandi Poostii teessoo isaa magaalaa Asoosaa godhate dhaabee sochii eegalee jira. Humna waraanaas bobbaasaa jira.
Kanaaf gama ABO'n hojiin xumuramuu qabu yeroon dhumee karaa nagaa fixachuun harka keenyarra waan jiruuf, mari'achaa cimsinee hojjechuu qabna jedhu Komishinar Alamaayyoon.
Waliigaltee mootummaafi Adda Bilisummaa Oromootti wanti gufuu ta'e maali?
20 Muddee 2018
Waligaltee ABOfi Itoophiyaa: gaaffii Oromootu ABO dhalche
8 Hagayya 2018
ABO: Loltootni keenya biyya keessa turan haaluma duraaniin karaa nagaan socho'aa jiru,''
2 Onkololeessa 2018
'Wixineen labsii gabatee konkolaataa naannoo hambisu paarlaamaaf qajeelfame oduun jedhu soba'
‘Dhimmoonni ani irratti gaafatame labsii yeroo muddamaa waan ilaallatan miti'
Sa'aatii 9 dura
MM Abiy ergaa Fiigicha Guddicha ilaalchisuun dhaamaniin maal jedhan?
'Dhiyeenya kana nama nubiraa baasan keessaa namni saddeet du'eera'
21 Amajjii 2022
Warqee Itoophiyaa qalbii qorattoota addunyaa hawwate
22 Amajjii 2022
Badhaadhinni hooggansi naannoo daldala simintoofi jimaa keessa hin seenne jedhe
20 Amajjii 2022
Tuuti Gadaa Michillee warra Dullachaa Karrayyuu erga ajjeeffamanii booda Gadaansaanii akkam ta'a?
Irra deebiin cufamuu Riizoortii Soodareefi deebii qaama mootummaa
Dargaggoo Oromoo meetira 2.25 dheeratu Nagawoo Jimaan walbaraa
17 Amajjii 2022
'Namoonni haala qaama kootti kolfu garuu anis uumama Waaqaati'
18 Amajjii 2022
'Dhalattuu baadiyyaa Oromiyaa ta'ee Ameerikaatti dorgomuun seenaa guddaadha'
Namtichi Ameerikaa reeffi isaa bofa 100 oliin marfamee argame
Ministirri mummee Niiw Ziilaand sababii Koovidiin sagantaa cidha isaanii haqan
Dubartoonni hakiima dhiiraan wal'aanaman kan dubartootaan wal'aanaman caalaa du'u-Qorannoo
Inistitiyuutii Qorannoofi Qo’annoo Oromoo akka Afaan Oromoo qajeelchu aangeffame beektuu?
Sooriyaatti gareen IS mana hidhaa cabsee seenuu hordofee walitti bu'insi uumame